Dagaal beeleed ka socda Warshiikh | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal beeleed ka socda Warshiikh
Dagaal beeleedyo ay dad badani ku dhinteen ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin hoos yimaada Degmada Warsheekh, sida maamulka degmada uu usheegay warbaahinta gudaha.
WARSHIIKH, Soomaaliya - Degmada Warshiikh oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeleedyo ay dad badani ku naf waayeen, kuwaasoo marba marka ka dambeysa sii kordhaya, dilalka ku saleysan aanooyinka qabiilka iyo dhul daaqsimeedka deegaanada ayaa sabab u ah hurinta colaadaha qabaa'illada gobolka.
Sagaal Guri ayaa lagu gubay tuulooyin hoostaga degmada Warshiikh oo dagaal beeleedyo xooggani ka socdaan, maamulka degmada Warshiikh ayaa ku eedeeyay in dagaalka ay qeyb ka yihiin Ciidamada dowladda. guddoomiyaha degmada Warsheekh ayaa ka codsaday madaxda dowladda Soomaaliya, tan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxkamadda ciidamada qalabka sidda in si deg deg ah loosoo faragaliyo dagaalada ka holcaya.
Dagaal beeleedyada ka socda tuulooyinka hoos yimaada Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa gaystay khasaaro kala duwan, waxaana malleyshiyadka dagaalamaya ay iska gubeen guryo iyo beero, ma jiraan waan-waan socota oo u dhaxaysa dhinacyada dagaallamay, maamulka Hirshabeelle iyo DF ayaan weli ka hadlin dagalladaas oo ah kuwo soo noq-noqday.